पुरातात्त्विक प्रमाणले बाइबललाई समर्थन गर्छ: फारसी साम्राज्यको तत्तनै
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबानाग इलोको इसोको ईवी उङ्गान्गेला उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उर्दू उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन काजाक काबीय किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चुभास चेक चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जाभानिज जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डेनिश ड्रेहु तामिल तोक पिसिन तोजोलबल त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) निआस निऊ नेपाली नोंगा न्यानेका पंगासिनन् पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फन फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाश्कीर बियाक बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मबुन्डा मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मिजो म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सामोअन सिंहला सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
यो शिलालेखमा तत्तनु नाम उल्लेख गरिएको छ
के बाइबल विवरणलाई समर्थन गर्ने पुरातात्त्विक प्रमाण छ? सन्‌ २०१४ को पुरातत्त्वसम्बन्धी एउटा पत्रिकामा * यस्तो प्रश्न सोधिएको थियो: “बाइबलको हिब्रू धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएका कति जना व्यक्तिलाई पुरातत्वविद्‌हरूले वास्तविक हुन्‌ भनेर पुष्टि गरेका छन्‌?” त्यसमा यस्तो जवाफ दिइएको थियो: “कम्तीमा ५०!” यो सूचीमा नपरेका एक व्यक्ति हुन्‌, तत्तनै। उनी को थिए? बाइबलमा उनको भूमिकाबारे दिइएको विवरण विचार गरौं।
कुनै समय यरूशलेम विशाल फारसी साम्राज्यको भाग थियो। यो सहर, यूफ्रेटिस नदीको पश्‍चिमपट्टि पर्थ्यो जुन ठाउँलाई फारसीहरूले “नदी पारि” भन्ने नाम दिएका थिए। बेबिलोनमाथि जित हासिल गरिसकेपछि फारसीहरूले यहूदी कैदीहरूलाई मुक्त गरिदिए र उनीहरूलाई यरूशलेममा यहोवा परमेश्वरको मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्ने अनुमति दिए। (एज्रा १:१-४) यहूदीहरूका शत्रुले यो कामको विरोध गरे र मन्दिर पुनर्निर्माण गरेर उनीहरू फारसविरुद्ध उठेका छन्‌ भन्ने झूटो आरोप लगाए। (एज्रा ४:४-१६) राजा दारा प्रथमको शासनकालमा (ईसापूर्व ५२२-४८६) तत्तनै नाम गरेका एक फारसी अफिसरलाई यो मामिला छानबिन गर्न पठाइयो। उनलाई बाइबलमा “यूफ्रेटिसपारिका प्रान्तका राज्यपाल” भनेर सम्बोधन गरिएको छ।—एज्रा ५:३-७.
तत्तनैको नाम उल्लेख गरिएका थुप्रै शिलालेखहरू भेट्टाइएका छन्‌। यी शिलालेख सायद पारिवारिक अभिलेखालयको भाग हुन सक्छ। उक्त परिवारको एक जना सदस्यको बाइबल पात्र तत्तनैसँग के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा एउटा प्राचीन कबुलनामा पत्रबाट पुष्टि हुन्छ। यो पत्र राजा दारा प्रथमको शासनको २० औं वर्षमा अर्थात्‌ ईसापूर्व ५०२ मा लेखिएको थियो। यसमा “यूफ्रेटिसपारिका प्रान्तका राज्यपाल तत्तनुको” एक सेवक कारोबारको साक्षी भएको कुरा बताइएको थियो। यहाँ बताइएको “तत्तनु” भन्ने व्यक्ति बाइबलको एज्रा भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गरिएका तत्तनै हुन्‌।
तत्तनैको भूमिका के थियो? ईसापूर्व ५३५ मा महान्‌ कोरेसले आफ्नो साम्राज्यलाई प्रान्तहरूमा विभाजित गरे। तीमध्ये एउटा प्रान्तलाई “बेबिलोन र नदी पारि” भन्ने नाम दिइयो। यो प्रान्तलाई पछि दुई भागमा टुक्राइयो जसमध्ये एउटाको नाम “नदी पारि” भन्ने थियो। यसमा कोल्-सिरिया, फोनिसिया सामरिया र यहूदा पर्थ्यो अनि यसलाई सायद दमीशकबाट शासन गरिन्थ्यो। तत्तनैले यो इलाकामा ईसापूर्व ५२०-५०२ तिरसम्म राज्यपालको रूपमा काम गरे।
मानिसहरूले यहूदीहरूमाथि लगाएको आरोपबारे छानबिन गर्न तत्तनै यरूशलेम गए। त्यहाँबाट फर्केपछि उनले राजा दारालाई यहूदीहरूले यहोवाको मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने अनुमति कोरेसबाट पाएको कुरा बताए। ऐतिहासिक घटनाहरू भएको शाही विवरणले पनि यो कुरा पुष्टि गऱ्यो। (एज्रा ५:६, ७, ११-१३; ६:१-३) त्यसैले तत्तनैलाई पुनर्निर्माणको काममा कुनै रोकटोक नलगाउन हुकुम दिइयो र उनले त्यसै गरे।—एज्रा ६:६, ७, १३.
हुन त हो, “यूफ्रेटिसपारिका प्रान्तका राज्यपाल तत्तनै”-ले खासै ठूलो ऐतिहासिक महत्त्वका काम गरेका छैनन्‌। तर याद गर्नुहोस्, बाइबलमा उनीबारे पनि उल्लेख गरिएको छ र उनको पदवीबारे एकदम सही विवरण दिइएको छ। यो तथ्यले बाइबल पुरातात्त्विक हिसाबमा सही छ भन्ने कुराको अर्को एउटा प्रमाण दिन्छ।
^ अनु.2Biblical Archaeology Review
अर्को एउटा पुरातात्त्विक प्रमाण